Ingxelo yamaTunami yama-Indiya ka-2004 kunye neMvalela yayo
I-tsunami yama-Indian Indian 2004
NgoDisemba 26, 2004, yabonakala njengeCawa eliqhelekileyo. Abalobi, abathengisi, abadumi bamaBuddha, oogqirha bezobugqirha, kunye ne-mullahs - bonke abajikeleze i-Indian Ocean basin, abantu bahamba ngeendlela zabo zokusa. Abavakhenkethi baseNtshona beza kwiholide yabo yeKrisimesi bafika kwiilwandle zaseThailand , eSri Lanka naseIndonesia, bevuya ngelilanga elitshisa elifudumele kunye namanzi aluhlaza olwandle.
Ngaphandle kwesilumkiso, ngo-7: 58 ekuseni, iphosakelo kunye nolwandle lwama-kilomitha ezingama-250 (155 miles) empuma-mpuma yeBanda Aceh, kwi-Sumatra, e-Indonesia, ngokukhawuleza yanikela.
Ubungakanani be-9.1 ngaphantsi kwamanzi anyikima iikhilomitha ezili-1,200 (750 miles) yephulo, ukufuduka kwamanzi amanxwemitha angama-20 (66 feet), kwaye uvula imitha engama-10 ubude (33 inyawo).
Le ntshukumo yokukhawuleza yabakhulula ubunzima obungenakucingelwa - amandla angama-550 yezigidi ukuphindwa kwebhomu ye - athomu ku-Hiroshima ngo-1945. Xa i-seafront ikhuphuke phezulu, yabangela uqukumbelo olukhulu lwe-Ocean Ocean-oko kukuthi, i- tsunami .
Abantu abasondelene ne-epicenter babenelumkiso malunga nentlekele ebonakalayo - emva koko, bevalelwa inyikima enamandla. Nangona kunjalo, ama-tsunami aqhelekanga kuLwandle lwamaNdiya, kwaye abantu babephethe imizuzu engama-10 kuphela. Akukho zixwayiso ze tsunami.
Ngeli-8: 8 ekuseni, ulwandle lwasuka ngokukhawuleza luvela emanxwemeni awonxweme enyakatho yeSatatra. Emva koko, uchungechunge lwamagagasi amane amaninzi luphazamise elwandle, oluphezulu lugqityiweyo kumamitha angama-24 ubude (80 iinyawo).
Emva kokuba amaza atshabalalisa imivumba, kwezinye iindawo i-geografi zendawo zazithungela kwizilwanyana ezininzi, ezide ezingama-30 zamitha (100 inyawo).
Amanzi olwandle agubungela ngaphakathi, ahlasele iindawo ezinkulu zeNxweme yase-Indonesian engenazo izakhiwo zabantu, kwaye athathe abantu abaqikelelwayo abayi-168,000 ekufeni kwabo.
Kwiyure kamva, amaza afika eThailand; engabonwanga kwaye engaqapheli ingozi, malunga nabantu abayi-8 200 babanjwe ngamanzi e-tsunami, kuquka nabakhenkethi abavela kumazwe angama-2 500.
Amaza agqitha ama- Maldive Islands aphantsi, abulala abantu abangama-108 apho, aze aqhubekele eIndiya naseSri Lanka, apho amanye ama-53,000 afa angama-iiyure ezimbini emva kokuzamazama komhlaba. Amaza ayengama-12 emitha (40 ubude). Ekugqibeleni, i-tsunami yahlasela ulwandle lwaseMpuma Afrika emva kweeyure ezisixhenxe. Nangona ukuphela kwexesha, abaphathi babengenayo indlela yokubaxwayisa abantu baseSomalia, iMadagascar, i-Seychelles, iKenya, iTanzania kunye neMzantsi Afrika. Amandla avela kwi-quake ede kakhulu e-Indonesia ayithatha abantu abangaba ngu-300 ukuya ku-400 kunye noonxweme lwase-Indiya lwase-Indiya, ininzi kwingingqi yasePuntland yaseSomalia.
Konke, abantu abangama-230 000 ukuya kuma-260,000 abantu bafa kwiNyikima ye-Indian Ocean kunye ne-tsunami. Ingqungquthela ngokwayo yayinamandla okwesithathu ukususela ngowe-1900, idlula kuphela ukuzamazama komhlaba okukhulu kweChile ka-1960 (ubukhulu be-9,5), kunye no-1964 Ukuguqulwa kokuSungulwa koLwesihlanu ku-Prince William Sound, e-Alaska (ubukhulu 9.2); zombini ezo zintlanzi nazo zavelisa ama-tsunamisi abulalayo kwi-Basin Ocean.
I-tsunami yase-Indiya yase-Indiya yayiyingozi kakhulu kwimbali ebhaliweyo.
Kutheni abantu abaninzi kangaka bafa ngoDisemba 26, 2004? Abantu abanxweme abanzi behlangene kunye nokungabikho kwezakhiwo zokuxwayisa iziseko ze-tsunami behlangene ukuze bavelise umphumo owonakalisayo. Ekubeni ama-tsunami aqheleke kakhulu kwiPacific, ukuba ulwandle lugcwele i-tsunami-i-warning warning, ilungele ukuphendula ulwazi oluvela kwi-tsunami-detection buboys ebekwe ngaphesheya kwendawo. Nangona i-Indian Ocean iyasebenza, yayingenayo i-tsunami yokufumanisa ngendlela efanayo-nangona iindawo ezinxweme ezininzi kunye nezona ziphantsi.
Mhlawumbi ininzi yamaxhoba e-tsunami ka-2004 awakungasindiswa yi-buoys ne-sirens. Emva koko, bekude kakhulu ukufa e-Indonesia, apho abantu babeshukunyiswa yi-quake enkulu kwaye banemizuzwana yokufumana umhlaba ophezulu.
Kanti abantu abangaphezu kwama-60,000 kwamanye amazwe babeya kugcinwa; babeza kuba neyure ubuncinane ukuba bahambe ukusuka elunxwemeni - ukuba babenelumkiso. Kwiminyaka ukususela ngo-2004, amagosa asebenze kanzima ukufaka nokuphucula i-Syrian Ocean Tsunami. Ngethemba, oku kuya kuqinisekisa ukuba abantu base-Indian Ocean basayi kuphinda babanjwe ngokungazi kakuhle ngelixa iindonga ezili-100 zamanqindi emanzini kumanxweme abo.
UHelen of Troy e-Iliad kaHomer
Ubomi kunye noMsebenzi weNapoleon Bonaparte
Sufi - The Mystics of Islam
Iifoto ze-Amazing Shaolin Monks
Ngaba uAdolf Hitler wayengumNzululwazi?
Ubomi Nomsebenzi kaHomer
Ubuvukeli obomvu kwiTshayina, 1351-1368
I-Lombards: Intlanga yesiJalimane eNyakatho yeItali
I-Veronica Roth Bio kunye neencwadi
'I-Mermaid Ingokoqobo' Ividiyo iyinyani - Kodwa Ngaba Uyazi ukuba, kunjalo?
Isikhokelo sembali kunye nesimbolo seHong Gar Kung Fu
Isicwangciso seBrick Wall Strategies for Ending Dead End Trees
Yintoni iVelocity kwiFizikiki?
I-2 Iifom eziPhambili zeMandla
Iyintoni Isiganeko Sesono?
Yenza i-Ammonium Nitrate kwiiKhemikhali zasekhaya
Iprogram yeWarsaw: Ixesha leMashumi amabini eXesha lamaRashiya kwisiRashiya
Izixhobo eziLungileyo ezili-10 eziLungileyo zama-Seventies
Indlela yokuVunywa kweLifa lokuSebenza
Isihlandlo: Ubukhoboka eKapa Colony
IYunivesithi yaseVirginia Admissions
IShedyuli yoTyelelo lwe-PGA: Ixesha le-2017-2018
Ukunyamekela Ubomi Bakho Bomzimba
Imbali yabasetyhini kwiNkundla ePhakamileyo
Ukutya kweeFowuni 1521: Izikwere zikaLuther zihamba kunye noMlawuli
ImiSebenzi yoLondolozo lweNdlu
Funda ukuba yiyiphi i-Element inexabiso elincinane kunazo zonke
I-8 Ininzi Ebalulekileyo NgoRosh Hashanah